DISTRIKAN’I MANJA AO MENABE : Tafakatra dimy ireo kaominina rakotry ny kijeja
Mandravarava amin’izao fotoana izao ny valala any amin’iny distrikan’i Manja, Faritra Menabe iny. 6 mars 2019
Mahatratra hatrany amin’ny 800 ha mahery ny velaran-tany rakotry ny kijejy any amin’iny Faritra iny. Nitombo araka izany ny velaran-tany henik’ireto andiam-balala ireto satria raha kaominina roa no rakotra teo aloha dia efa niitatra ho kaominina dimy izany amin’izao fotoana izao.
Manoloana izany indrindra dia tsy nitazam-potsiny ny tompon’ andraikitra fa niezaka namendraka fanafody tamin’ireo faritra nandalovan’ireto andiam-balala ireto. Vao nanomboka nipoitra tany an-toerana moa ireto andiam-balala ireto dia efa nandray fepetra ny tompon’andraikitra tamin’iny volana febroary lasa teo iny.
Ho fisorohana ny fiitarany any amin’ny faritra hafa dia velaran-tany maherin’ny 867 ha no efa notondrahana fanafody tao anatin’ny telo volana ary mbola hitarina any amin’ny faritra hafa izany amin’ity volana marsa ity.
Hatreto aloha dia mbola azo lazaina ho voafehy ireto andiam-balala ireto satria dia mbola ao amin’ny distrikan’i Manja ihany no misy azy ary ezahina araka izay azo atao ny tsy hitaran’izany any amin’ny faritra hafa, hoy ny tompon’andraikitra any an-toerana.